ဤကြံ့သူတော် တိရစ္ဆာန်သည် သီးခြားကိုယ်ပိုင်မျိုးရင်းမှဖြစ်သည်။ ကြံ့မျိုးရင်းဝင်မဟုတ်ပါ။
ကြံ့သူတော်သည် အရွယ်အစားကြီးမားသော အသီးအရွက်စားသတ္တဝါ ဖြစ်သည်။ ဝက်နှင့် ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ချင်း ဆင်တူ သည်။ တိုပြီး လှုပ်ယိမ်းနိုင်သော နှာတံ ရှိသည်။ ကြံ့သူတော်ကို တရရှူးဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ ကြံ့သူတော်များကို တောင်အမေရိကတိုက်၊ ဗဟိုအမေရိကနှင့် အရှေ့တောင်အာရှတို့ရှိ သစ်တောများနှင့် တောအုပ်များတွင် တွေ့ရလေသည်။ မျိုးစိတ်ငါးမျိုး ရှိပြီး အားလုံးသည် တာပီရီဒေးမျိုးရင်းတွင် ပါဝင်လေသည်။ ယင်းတို့မှာ ဘရာဇီးကြံ့သူတော်၊ မလေးကြံ့သူတော်၊ ဗဟိုအမေရိကကြံ့သူတော်၊ ကာဘိုမာနီကြံ့သူတော်နှင့် တောင်ကြံ့သူတော်တို့ ဖြစ်သည်။ ကြံ့သူတော်များ၏ အနီးစပ်ဆုံးဆွေမျိုးများမှာ ခွာမစုံသောစားမြုံ့ပြန်နို့တိုက်သတ္တဝါများဖြစ်ပြီး မြင်း၊ မြည်း၊ မြင်းကျားနှင့် ကြံ့များ ဖြစ်သည်။
၄ ရှင်သန်ဆဲ မျိုးစိတ်များ
Tapirus bairdii(Gill, 1865) Baird's tapir (also called the Central American tapir) Mexico, Central America and northwestern South America Includes Kabomani tapir(Tapirus kabomani).
Tapirus terrestris(Linnaeus, 1758) South American tapir(also called the Brazilian tapir or lowland tapir) Venezuela, Colombia, and the Guianas in the north to Brazil, Argentina, and Paraguay in the south, to Bolivia, Peru, and Ecuador in the West.
Tapirus indicusDesmarest, 1819 Malayan tapir (also called the Asian tapir, Oriental tapir or Indian tapir) Indonesia, Malaysia, Myanmar, and Thailand May be placed in Acrocodia
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြံ့သူတော်&oldid=716587" မှ ရယူရန်